Filtrer les éléments par date : lundi, 18 novembre 2019
lundi, 18 novembre 2019 22:38
Andafiavaratra: Tsy notononina ny hoe Nosy Malagasy na fiaraha-mitantana, hitohy any Paris ny dinika
Taorian'ny fihaonana nataon'ny delegasionina malagasy sy frantsay, dia nisy fanambarana iombonana teo amin'ny roa tonta.
lundi, 18 novembre 2019 17:26
Sambava: Tovolahy matin’ny herinaratra tany ampakana hazo
Tovolahy iray, manodidina ny 20 taona, no maty tsy tra-drano main’ny herinaratra ny alahady 17 novambra 2019, tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro.
Tany an-tsaha, naka hazo tao Ambodisatrana II izy sy ireo namany, ary an-dalana hody no tra-doza ; nikasoka tamin’ny taribin’ny Jirama mitondra herinaratra mahery vaika, izay somary mikirazorazo ka maty tsy tra-drano.
Nampandre ny olona tany an-tanàna sy ny manampahefana ity loza ireo namany niara-dia taminy. Tonga ny avy amin’ny Jirama sy ny Zandary ary koa ny mpitsabo nanamarina ny fisian’ny loza.
lundi, 18 novembre 2019 17:14
Sakafo: Niarahaba ny fahatongavan’ny KFC i Chef Mbinina
Ora vitsy taorian’ny nisokafan’ny toeram-pisakafoanana voalohan’ny vondrona KFC etsy amin’ny Water Front Ambodivona-Antananarivo androany alatsinainy 18 novambra, dia nanao fanambarana tao amin’ny pejiny facebook i Randrianaivo Ambinintsoa Arson na Chef Mbinina, filoha mpanorina ny La Gastronomie Pizza.
« Tongasoa KFC ! », hoy i Chef Mbinina. Nanome toky ireo mpanjifany i Chef Mbinina manoloana ny resabe miely, indrindra amin’ny tambazotra sosialy, milaza fa « ho faty amin’izay ny La Gastronomie Pizza ». « Marina fa bitika kely izahay fa tsy ho faty izany io, hihatsara aza. Hiatrika ady sarotra mihitsy no maha Chef ahy ! Aza matahotra », hoy hatrany i Chef Mbinina.
lundi, 18 novembre 2019 16:11
Sakafo: Misokatra ny toeram-pisakafoana voalohan’ny vondrona KFC
Nanoka-baravarana etsy amin’ny Tana Waterfront Ambodivona, nanomboka androany 18 novambra 2019 ny toeram-pisakafoana voalohan’ny vondrona KFC.
Ny fisokafan’ny toerana tahaka itony eto amintsika dia hitondra fitomboana eo amin’ny lafiny toe-karena, ary hiteraka asa ho an’ny mponina, hoy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nandritra ny lanonam-panokafana ity toeram-pisakafoana ity.
Hisy toeram-pivarotana faharoa hisokatra eto Antananarivo Renivohitra amin’ny volana aprily 2020, ary hiitatra any amin'ny faritany aorian’izay, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny vondrona KFC.
lundi, 18 novembre 2019 16:00
Stade Omnisport d'Antsiranana: Hovitaina ato anatin’ny enim-bolana
Mitohy ny asa fanamboarana ny Stade Omnisport d'Antsiranana rehefa nihitsoka nandritra ny dimy taona teo. Nanomboka tamin’ny volana mey 2019 ny asa, ary hovitaina ato anatin’ny enim-bolana, ary ho afaka handraisana lalao iraisam-pirenena.
lundi, 18 novembre 2019 15:22
Toamasina: Misokatra ny taom-piotazana lodsia
Tonga teto Toamasina nanokatra ny taom-piotazana lodsia ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Rakotosoa Lantosoa, nijery ny fandehany niaraka tamin’ireo mpandraharaha mivondrona ao amin’ny GEL (Groupement des Exportateurs de Litchi).
Lodsia hatramin'ny 17 500 taonina no ahondrana amin’ity taona ity, ka sambo roa no ho tonga eto Toamasina haka ireo.
1 000 Ariary, hoy ireo mpanangom-bokatra, no andraisan’ny exportateur ny lodsia iray kilao efa vita sivana na calibrage, nefa 70 000 Ariary no hividianana ny lodsia iray garaba milanja 25kg na 30kg any ambanivohitra.
Mbola vitsy ny mpitatitra hatreto, ka mitoby fotsiny eny an-dalam-be ny lodsia any ambanivolo, indrindra ny any Fenoarivo Atsinanana iny noho ny haratsin’ny lalana.
lundi, 18 novembre 2019 15:21
Nosy Malagasy: Ireo mpidinika eny Andafiavaratra
Miisa folo, miampy 02, ireo mpikambana ao amin’ny vaomiera iraisan’i Madagasikara sy Frantsa manao ny drafitra ny amin’ireo Nosy Malagasy. Manana mpikambana dimy miampy 01 i Madagasikara ary Frantsa manana 05, miampy ny ambasadoro frantsay maha 06 ny azy.
Ho an’i Madagasikara dia ahitana an’i
1-Christian Ntsay, Praiminisitra lehiben’ny Governemanta, izay mitarika ny delegasiona,
2-Profesora Raymond Ranjeva, mpahay lalàna isan’ny nandray anjara tamin’ny dinika tany amin’ny Firenena Mikambana,
3-Vice-Amiral Ranaivoseheno Louis Antoine de Pädoue, Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena,
4-Capitaine de Vaisseau Randrianantenaina Jean Edmond, tale Jeneralin’ny APMF,
5-Dr Tehindrazanarivelo Djacoba Liva, mpampianatra lalàna iraisam-pirenena, ny lalàna afrikana any amin’ny Oniversite ny Suisse, izay efa nandray anjara tamin’ny famahana ireo olana maro taty Afrika.
Miampy an-dRatsimbazafy Soloherinaina Eric, « Chargé d'études et coordinateur du Centre d'études et d'analyses stratégiques » eo anivon’ny ministeran’ny raharaham-bahiny. Tsy tao anaty lisitr’ireo anarana navoaka tamin’ny Filankevitry ny minisitra tamin’ny alarobia ny anaran’ity farany.
lundi, 18 novembre 2019 13:54
Andafiavaratra: Dinika fihaonana kaomisionina Malagasy - Frantsay
Andafiavaratra: Dinika fihaonana kaomisionina Malagasy - Frantsay mikasika ny famerenana amin'i Madagasikara ireo Nosy Malagasy.
lundi, 18 novembre 2019 13:16
Antazoa-Malaimbandy: Trano 85 kilan’ny afo vokatry ny doro tanety
Nitrangana haintrano goavana tao Antazoa, Kaominina Malaimbandy, Distrikan’i Mahabo, ny faran’ny herinandro teo. Trano 85 tafo no rava, kilan’ny afo vokatry ny doro tanety. 366 tsy manan-kialofana vokatr’ity haintrano ity.
May hatramin’ny EPP, misy mpianatra 140. Tsy afa-mianatra ireto farany vokatr’io haintrano io, satria may avokoa ny fitaovam-pianaran’ny mpianatra.
Mpamatsy manga an’Antsirabe io tanàna io. Telo kamiao isan'andro ny manga mivoaka ao Antazoa, nefa may avokoa ny ala manga vokatr’ity doro tanety ity.
Tonga tao an-toerana ny solontenam-panjakana nitondra fanampiana ho an'ireo traboina.
lundi, 18 novembre 2019 09:19
Andranomanelatra-Antsirabe II: Lehilahy avy nijery savik’omby, maty voadoan’ny fiara
Lehilahy iray no maty voadonan’ny fiara ny alahady 17 novambra 2019, tao Andranomanelatra-Antsirabe II, tokony ho tany amin’ny 8 ora sy sasany alina. Teo amin’ny toerana tsy lavitry ny Garan-damasinina teo aloha no voafaokan’ny fiara ity lehilahy ity, raha ny angom-baovao ihany.
Nambaran’ireo manodidina fa ny firefotry ny fifandonana no nanaitra ny nanodidina ka nivoahan’izy ireo ny trano, no nahitana ity lehilahy voadona ity, izay maty tsy tra-drano avy hatrany. Nirifatra nanohy ny diany ilay fiara nandona fa tsy nijanona, ny andro rahateo efa maizina.
Ny mpitandro filaminana tonga nijery ny loza no nahafantarana fa mponina avy any amin’ny Fokontany Ambolotsararano, Kaominina Andranomanelatra ity lehilahy ity, ary nikasa hody izy izao voadonan’ny fiara izao.
Misokatra ny fanadihadiana, saingy mahakely finoana ny mety ahitana izay nahavanon-doza.